Ntụgharị Asụsụ Cantonese, Ịsụgharị, Ọrụ Nsụgharị - Ibe Mbụ
Ịghọta Asụsụ Cantonese & Inye Ọkachamara Cantonese Interpreters, Translators and Transcriptionists
Ọrụ Asụsụ Amerịka (AML-Global) ghọtara mkpa ịrụ ọrụ n'asụsụ Cantonese. Ruo ihe karịrị otu ụzọ n'ụzọ anọ nke otu narị afọ, Ọrụ Asụsụ Amerịka ejirila asụsụ Cantonese na ọtụtụ narị ndị ọzọ si gburugburu ụwa rụọ ọrụ. Anyị na -enye ọrụ asụsụ zuru oke awa 24, ụbọchị asaa n'izu n'ụwa niile site na ịnye ọrụ Cantonese ntụgharị, ntụgharị na ntụgharị yana narị narị asụsụ na olumba ndị ọzọ. Ndị na -asụ asụsụ anyị bụ ndị na -asụ asụsụ obodo na ndị edemede na -enyocha, nzere, gbaara asambodo, nwalere ubi ma nwee ahụmịhe n'ọtụtụ ntọala ụlọ ọrụ akọwapụtara. Asụsụ Cantonese pụrụ iche, nweekwa mmalite na njirimara ya.
China na ọrụ ọhụrụ ya dị ka nnukwu ike
Njem nlegharị anya na China gbawara na mmeri n'egwuregwu Olimpik nke 2008 were ụwa egwuregwu n'oké ifufe na ihe ngosi dị ịtụnanya nke emume mmeghe nyere ndị na -ekiri ya. Na nde kilomita 9.6, ndị mmadụ Republic of China bụ mba nke atọ ma ọ bụ nke anọ kachasị na ụwa site na mkpokọta mpaghara, na nke abụọ kachasị site na mpaghara ala. Ọ na -ejide ọnụ ọgụgụ mmadụ kachasị na ebe ọ bụla n'ụwa ma na -eto eto ka ọ bụrụ ike nwere ụlọ nrụpụta ya dị mma. China na -arụsi ọrụ ike na -etolite ngwanrọ ya, semiconductor na ụlọ ọrụ ike iji sonye US, gụnyere ume ọhụrụ dị ka mmiri, ikuku na ike anyanwụ. Na mbọ iji belata mmetọ sitere na osisi na-ere kol (Red Herring nke arụmụka na-ekpo ọkụ zuru ụwa ọnụ), China anọwo na-ebute mbubata ndị na-ebugharị ngwa agha nuklia, nke na-agba oyi ma dịkwa nchebe, na-ekwupụtabeghị mmetọ. N'ihi na China nọ na njedebe nke ịbụ nnukwu ike, nlebara anya ụwa niile lekwasịrị anya n'ahịa na akụ na ụba yana otu o si emetụta mba ndị ọzọ dị mkpa. China na -akwadokwa nnukwu ụlọ ọrụ ndị njem, yana obodo dịka Shanghai na Beijing na -enye ọtụtụ nde ndị njem mba ofesi kwa afọ. Ihe ịga nke ọma n'egwuregwu Olympic 2008 zigaara ụwa ozi na China dị njikere idu ma were ọnọdụ ya n'etiti mba kachasị ike n'ụwa.
Cantonese: Alaka nke mbụ nke Chinese
N'ịbụ onye a na -asụ dị ka ngalaba China, Cantonese, dị ka ngalaba ndị ọzọ bụ isi nke Chinese, a na -ahụta ka ọ bụrụ olumba nke otu asụsụ Chinese maka ebumnuche agbụrụ na ọdịbendị, mana a na -ewerekwa ya dị ka asụsụ n'onwe ya n'ihi na ọ naghị enwe nghọta. ụdị Chinese ndị ọzọ. Dị ka ọtụtụ asụsụ ndị isi, Cantonese nwere ọtụtụ olumba dị iche iche dabere na mpaghara China. a na -ahụta asụsụ Yuehai ka ọ bụrụ onye nnọchite anya asụsụ niile. Guangzhou sub-olumba nke Yuehai ka emebere ụkpụrụ mmekọrịta ọha na eze n'ihi ugwu ya. Yabụ, mgbe ị na -ekwu maka Cantonese, ọ nwekwara ike ịpụta olumba Guangzhou. N'èzí China, ọnụ ọgụgụ kasịnụ nke ndị na -asụ Cantonese na mpụga ala China na Hong Kong dị na ndịda ọwụwa anyanwụ Eshia, agbanyeghị na ndị na -asụ asụsụ min kachasị n'etiti ndị China si mba ofesi na South East Asia.
Mmepe nke Cantonese
Cantonese bụkwa otu n'ime asụsụ ndị bụ isi n'ọtụtụ obodo China nke esenidụt gụnyere Australia, Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia, North America na Europe. Ọtụtụ n'ime ndị mbịarambịa na/ma ọ bụ ndị nna nna ha sitere na Guangdong. Na mgbakwunye, obodo ndị a kwabatara malitere tupu ejiri Mandarin mee ihe, ma ọ bụ ha sitere na Hong Kong ebe a na -ejighị Mandarin.
Kedu onye ị ga -atụkwasị obi na mkpa asụsụ Cantonese gị dị mkpa?
Asụsụ Cantonese bụ asụsụ dị mkpa n'ụwa niile. Ọ dị mkpa ịghọta ọdịdị n'ozuzu ya na ụdị amamịghe nke Cantonese. Kemgbe 1985, AML-Global enyela ndị ntụgharị okwu Cantonese pụtara ìhè, ndị ntụgharị okwu na ndị na-edegharị akwụkwọ gburugburu ụwa.
Nwelite na ntụgharị asụsụ Cantonese
Na Machị 2020, nje Covid19 bu ụzọ butere United States. Ọ gbanwela otu anyị si arụ ọrụ nwa oge ma tinye oke na nkwukọrịta ihu na ihu. Anyị kwenyere na nke a nwere ike bụrụ ihe ọhụrụ maka obere oge wee nwee obi ụtọ ịnye gị ihe ọzọ dị egwu maka ịtụgharị asụsụ n'ime mmadụ.
Ngwọta Ntụgharị Asụsụ Na-adịghị Nchekwa, nke Ọma & Ọnụ-Efu
(OPI) Ịsụgharị ekwentị na ekwentị
Anyị na-enye ntụgharị asụsụ ekwentị (OPI) n'ihe karịrị asụsụ 100 dị iche iche. Ọrụ anyị dị n'ehihie, 24/7 ma na -arụ ọrụ nke ọma maka oku dị mkpụmkpụ, yana ndị na -anọghị n'oge azụmahịa gị. Nke a na -arụkwa ọrụ dị ukwuu maka ihe mberede na mgbe ị nwere mkpa ndị a na -atụghị anya ya. Ọ dị ọnụ ahịa ma dịkwa mfe iji. A na-enyekwa ọrụ a ma n'ọchịchọ ma tupu ịhazi oge.
A na -akpọ sistemụ VRI anyị Mebere njikọ ọ dịkwa maka Nchọgharị na Mbido. Ndị ọkachamara asụsụ anyị nwere ahụmahụ dị gburugburu elekere, 24/7. Usoro VRI anyị dị ngwa ma na -agbanwe agbanwe, na -efu ọnụ, dị mfe ịtọlite, yana akụ na ụba. Pịa ebe a maka ozi ndị ọzọ.